Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nepal » Nepal: Nofinofin'ny mpaka sary eny an-dalambe
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
sary any Nepal
Ny Trekking no manintona malaza indrindra any Nepal miaraka amina treks malaza toy ny Annapurna Circuit, Langtang ary Everest Base Camp treks hanome anarana vitsivitsy. Ny fitsangatsanganana an'ireny zotra malaza ireny dia mahasarika mpitsidika maherin'ny 150,000 isan-taona mankany Nepal. Amin'ny maha mpandeha an-tongotra anao dia azonao antenaina fa rehefa miditra ao amin'ny vohitra iray ianao, dia ho lany ny ankizy hangataka, “sary iray azafady.” Tian'izy ireo tanteraka izany raha maka ny sariny ianao ary avy eo mampiseho azy ireo amin'ny efijery LCD an'ny fakantsarinao. Saingy tsy ny ankizy ihany no faly fa eo amin'ny sarinao, fa saika ny olona rehetra any Nepal no hanery anao hanana sary.
Tompoko! Tompoko! Sary iray, sary iray, azafady.
I Nepal dia toeram-pizarana kilasy manerantany ho an'ny toerana an-tendrombohitra, mirehareha amin'ny tendrombohitra valo ambin'ny folo ambin'ny folo avo indrindra eto an-tany.
Ery ambanin'ny havoanan'ny Tendrombohitra Everest lehibe, dia faly matetika ny olona Nepaley manana anao maka ny sariny.
Ity dia miresaka betsaka amin'ny fihetsika ankapobeny momba ny mpitsidika sy ny fahaizana voajanahary amin'ny fandraisana olona izay mamaritra ny vahoaka Nepali.
Raha tianao ny maka sary an-tsary ny olona, ​​ny maritrano na ny eny an-dalambe tsy manam-paharoa, dia ho tianao ny fotoana fakana sary an'i Nepal. Ny Fanjakana Himalaya teo aloha, repoblika demokratika ankehitriny dia toeran-kaleha eran'izao tontolo izao ho an'ny toerana an-tendrombohitra, mirehareha amin'ny valo amin'ireo tendrombohitra efatra ambin'ny folo avo indrindra eto an-tany, anisan'izany ny Tendrombohitra Everest, tampon'ny havoana avo indrindra eto an-tany. Saingy avy any amin'ny havoana dia misy izao tontolo izao misy safidy sary tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa izay mifanohitra amin'ny sarin'ireo lehibe valo.
Ny olona Nepaley dia iray amin'ireo olona mandray olona indrindra eto an-tany ary faly amin'ny fahazoanao ny sariny, raha toa ka asehonao azy ireo amin'ny fakantsarinao, tian'izy ireo izany. Manodidina ny sasany amin'ireo tempoly ny lehilahy masina fantatra amin'ny anarana hoe Sadhu (Saadhu indraindray) dia mety hangataka fandoavam-bola 100 ropia, mitovy amin'ny dolara amerikana hitondrana ho anao fa ny olon-tsotra izay mety mifanena aminao eny an-dalambe angamba dia tsy hangataka zavatra aminao. . Ny fiheverana fotsiny fa ny firenena izay an-taonany maro amin'ny fidirana amin'ny Kianja Dashrath Rangasala, ilay kianja misy tanjona marobe misy eto amin'ny firenena, dia nisy fambara iray nanao hoe "Vahiny no Andriamanitra" na amin'ny andininy sanskrit, Atithi Devo Bhawa. Miresaka betsaka momba ny fihetsika ankapobeny momba ny mpitsidika sy ny fahaizan'ny olona mandray vahiny izay mamaritra ny vahoaka Nepaliy, manao Nepal iray amin'ny toerana ambony "lisitry ny siny".
Ho fanampin'ny fakana sary an-tsary “olona” praiminisitra, misy endrika eny an-dalambe any Nepal izay hafakely sy tsy manam-paharoa. Amin'ny maha mpaka sary miasa ahy any Nepal dia tsy lany toerana mihitsy aho haka sary ary na dia efa taona maro aza aho no naka sary an'i Nepal isaky ny mihodina aho dia toa misy sehatra hafa miandry ny hisamborana azy. Betsaka ny sisin-tany sy crannies miandry ho hita any amin'ny toerana toa ny renivohitr'i Kathmandu izay nisy fitomboana tsy nampoizina, sy tsy nomanina, dia namorona zavona an-dalambe mba hirenireny. Kaozy ny baterinao, alaharo ny karatra fakan-tsarinao ary miomàna ho mpaka sary eny an-dalambe tanteraka ny nofy tany Nepal.
Ny fakana sary an-dalambe dia ny fametrahana ny hoditr'akanjo sy ny fandehanana eny an-kianja, fa, raha nilaza aho fa afaka mivadika ho maze ny arabe, tsy misy tokony hatahorana ary afaka miroso amin'ny fahatokisan-tena araka ny eritreritry ny ankamaroan'ny olona ao Nepal ianao. ny fiadananao ho adidy manokana, na dia nihaona taminao fotsiny aza izy ireo. Taona maro lasa izay, nisy tovovavy iray izay nijanona tao an-tranonay, nieritreritra rehefa afaka adiny iray na lasa nandeha an-tongotra izy, ary very hevitra izy ny amin'ny làlana tokony halehany mba hahatratrarany ny tranonay. Niantso anay tamin'ny findainy izy ary ny vadiko, izay Nepaley tenany mihitsy, dia nanome torolàlana azy ho any amin'ny fivarotana akaiky indrindra ary hanome ny telefaona amin'izay olona rehetra ao. Taorian'ny resadresaka naharitra dimy minitra dia nanidy ny fivarotana ilay mpivarotra ary nametraka ilay vahiny nivily lalana tao an-damosin'ny môtô ary nanolotra azy teo am-baravaranay. Izany no karazana fandraisam-bahiny ho hitanao any Nepal. Toerana iray izay tsy anomezan'ny olona torolàlana anao fotsiny, fa hitodi-doha anao ho any amin'izay alehanao ianao.
Anisan'ireo fotoana maro azo jerena sary sary ao an-drenivohitr'i Kathmandu, aza hadino ny mitsidika ny tsenan'i Asan, toerana fivarotana ny mpivarotra ao an-toerana, Swayambhunath izay antsoina matetika hoe "tempolin'ny gidro," Boudha Stupa, ilay stupa malaza namboarina tamin'ny taonjato 14 ary naseho tamin'ny doka fizahan-tany maro. ho an'i Nepal, ary mazava ho azy Pashupati, ny anarana mahazatra an'ny Tempolin'i Pashupatinath, iray amin'ireo Tempoly Hindou manan-danja indrindra any Azia atsimo. Ireo toerana rehetra ireo dia manolotra tombony betsaka ho an'ny mpaka sary mandeha. Misy masoivoho fizahan-tany maro izay hikarakara fitsangatsanganana sary an-dalambe, na afaka maka sarintany ianao ary mivoaka irery. Kathmandu dia tanàna feno kolontsaina sy toerana miavaka tsy toy ny toerana hafa eto an-tany ary tena misy ny fotoana tsy voafetra fakana sary ao, ary mazava ho azy eraky ny havoanan'i Everest ka hatrany Terai, ny lemaka Nepal izay misy ny toerana nahaterahan'i Buddha.
Nilaza ny mpaka sary iray momba ny fakana sary an-dalambe any Nepal fa “Cool Chaotically” ary izany dia famaritana mety amin'ny iray amin'ireo toerana tsy manam-paharoa sisa tavela eto an-tany.